mars 2016 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Dia mampitodika antsika sahady any amin’ny Paka fandresena dia ny fitsanganan’I Jesoa Kristy ho velona ny tenin’Andriamanitra androany.
Raha fintinina dia hoe I Jesoa mpanafaka, avy hatrany dia ny Evanjely no handraisantsika ny fampianarana. Nandeha tany amin’ny tanimbolin’I Oliva I Jesoa nivavaka nandritra ny alina fanaon’I Jesoa io, maka fotoana mangina, fotoana mitokana hihaonana amin’Andriamanitra; izay aloha dia zava-dehibe izay. Izy Andriamanitra manokana fotoana hitodihana amin’ilay Ray, tahaka ny fanaontsika isan’alahady manokana fotoana hihaonana amin’Andriamanitra. I Jesoa moa dia ao amin’ny tanimbolin’I Oliva fa ho hitantsika ao amin’io toerana io ihany izy mivavaka tsembo-drà.
Ary rehefa avy any amin’ny tanimbolin’I Oliva I Jesoa dia niakatra tany an-tempoly hivavaka. Ka I Jesoa tao an-tempoly no nisy zava-nitranga, vehivavy iray tratran’ny olona tany amin’olona iray nijangajanga, izany hoe nanitsakitsa-bady. Ka notaritarihan’ny olona inty vehivavy nentina teo amin’i Jesoa mba hotsaraina, inona no hitsarana inty vehivavy inty? Dia noho izy tratra nijangajanga, iza no miampanga azy? dia ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina, inona ny sazy araka ny lalàna ho an’ny olona tratra manao an’izany?, itantsika io ao amin’ny Deteranoma 22;22, dia manampy izany koa ny Levitika 20; 10. Voalaza ao fa izay olona rehetra tratra mijangajanga dia torahim-bato ho faty ka io fijangajangana izany dia tsy vehivavy irery ihany fa tsy maintsy misy lehilahy ao ka mitovy ny sazy mahazo ny lehilahy sy ny vehivavy, samy torahim-bato ho faty, izay no sazy miandry izay olona tratra amin’io fijangajangana io. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha dimy karemy – 13/03/2016 : Toriteny
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (Iz 43, 16-21)
Indro Aho hanao zava-mahagaga vaovao, ary hanome rano hosotroin’ny vahoakako.
Izao no lazain’ny Tompo, izay nanao lalana eny amin’ny ranomasina, sakeli-dalana eny amin’ny rano mahery, izay namoaka kalesy aman-tsoavaly, sy tafika amam-piady mahery, hiantafika, — indray lavo tsy hiarina intsony izy rehetra; voakenda sy maty toy ny lahin-jiro izy. — Aza mahatsiaro ny zavatra lasa intsony, ary aza mihevitra ny zavatra taloha intsony! Fa indro Aho hanao zava-mahagaga vaovao; efa hiposaka izy izao, tsy hahalala izany va ianareo? Hanisy lalana any an’efitra Aho, sy ony eny an-tsaha karankaina. Hanome voninahitra Ahy ny biby eny an-tsaha, mbamin’ny amboadia sy ny ôstritsa, satria nanisy rano tany an’efitra Aho, sy ony eny amin’ny tany karankaina, hampisotroana ny vahoakako, ny olom-boafidiko, ny vahoaka noforoniko mba ho Ahy, ka hitory ny fiderana Ahy.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (Fil 3, 8-14)
Mba hahazoako an’i Kristy, dia ataoko fakofako foana ny zavatra rehetra, mba ho hita ao aminy aho.
Ry kristianina havana, ataoko fatiantoka tokoa ny zavatra rehetra raha oharina amin’ny fahambonian’ny fahalalana an’i Kristy Jesoa Tompoko; fa ny fitiavako Azy no namoizako ny zavatra rehetra, ary mba hahazoako an’i Kristy, dia ataoko fakofako foana ny zavatra rehetra, mba ho hita ao aminy aho, tsy amin’ny fahamarinan’ny tenako, na ilay avy amin’ny lalàna, fa amin’ilay avy amin’ny finoana an’i Kristy dia ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra noho ny finoana; mba hahalala Azy aho, dia Izy sy ny herin’ny fitsanganany ho velona, ary ny fiombonana amin’ny fijaliany, ka ho tonga toa Azy amin’ny fahafatesany, sy hahatratra ny fitsanganan-ko velona, raha azoko atao. Tsy dia hoe efa nahatratra sahady aho tsy akory, na hoe efa lavorary; fa miezaka aho mba hahatratra izay nahatratraran’i Kristy Jesoa ahy. Eny, ry kristianina havana, tsy manao ahy ho efa nahatratra aho, fa zavatra iray ihany no ataoko, dia ny manadino izay eo aoriako, sy miezaka ho amin’izay eo alohako, mihazakazaka hanatratra ny marika aho, mba hahazoako ny loka izay iantsoan’Andriamanitra ahy eny ambony eny, ao amin’i Kristy Jesoa
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 8, 1-11)
Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitoraka azy voalohany. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faha dimy karemy – 13/03/2016 : Tenin’Andriamanitra
Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016
Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016 Niaraka tamindry Masera tao amin’ny Compassion. Ny fietahana masina izay natao dia fotoana iray natao hahatsara ny fifandraisana amin’i Jesoa. Nandritra ny vanim-potoana…
Continuer la lecture Recollection VAHATRA – Alahady 06 Marsa 2016
Continuer la lecture Alahady fahaefatra karemy – 06/03/2016 : Toriteny
Io rahalahinao io, dia maty ka velona indray. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahaefatra karemy – 06/03/2016 : Tenin’Andriamanitra